रुपन्देहीको बुटवलस्थित् कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा थप दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु – Sidha Patra
रुपन्देहीको बुटवलस्थित् कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा थप दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
Sidha Patra शनिबार, भाद्र २०, २०७७
बुटवल । रुपन्देहीको बुटवलस्थित् कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा थप दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत एक महिला र एक पुरुषको मृत्यु भएको हो । अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा.सुदर्शन थापाले पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं.२ की ३७ वर्षीय महिला र बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ का ४० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनु भएको हो ।
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि भदौ १७ गते आइसोलेसनमा भर्ना भएकी महिलालाई शुक्रबार रातीदेखि भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । कोरोना संक्रमणबाहेक अरू कुनै स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको भएपनि शनिबार बिहान ६ बजे महिलाको मृत्यु भएको डा. थापाले बताउनु भयो ।
त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका ११ का ४० वर्षीय पुरुषको शुक्रबार राति सवा ११ बजे मृत्यु भएको हो । उनी भदौ १५ गतेदेखि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए भने चार दिनयता भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिदैं आइएको थियो । दुवै जनामा ज्वरो र श्वासप्रश्वासको समस्या रहेको तर अन्य दीर्घ रोग नरहेको डा. थापाले बताउनु भयो । यो सँगै रुपन्देही जिल्लामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १५ पुगेको छ । बुटवल उपमहानगरका मात्रै ६ जनाको ज्यान गएको छ । अहिले अस्पतालको आईसियूमा १४ र भेन्टिलेटरमा २ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
कोरोनाका कारण घोराहीमा एक जनाको मृत्यु
शुक्रवार दाङमा थप ३ जनामा कोरोना पुष्टि
कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डी प्रादेशिकमा सारियो